Eziokwu ahụ na-iji ọkụ ọkụ si n'ebe: ya mere conspiracies agbasa ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla - News Ọchịchị
Eziokwu ahụ na-iji ọkụ ọkụ si n'ebe: ya mere conspiracies agbasa ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla
site 9/11 na Paris ọgụ, si Ebola ka Isis, ọ bụla isi zuru ụwa ọnụ omume adọta a kwekọrọ ekwekọ counter-alụso ọrịa si 'truthers', ụfọdụ otú ndị niile na-asị na ha weghara ndụ ndị mmadụ. Na-ụbụrụ anyị wired kwere, dị ka a akwụkwọ ọhụrụ rụrụ ụka? Na ike dị otú ahụ na-eche echiche n'ezie bara uru?
Isiokwu a na-akpọ “Eziokwu ahụ na-iji ọkụ ọkụ si n'ebe: ya mere conspiracies agbasa ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla” e dere site David Shariatmadari, n'ihi na The Guardian on Saturday 26 December 2015 10.00 UTC
"Echetara m na-agụ banyere Final Fantasy VII, a nkiri mụ na ha na-atụ anya. Mmeghachi omume mbụ m bụ ndakpọ olileanya na ọ bụ afọ abụọ pụọ - n'ihi na site mgbe ahụ anyị ga-enwe n'aka ndị agha. "Ọ bụ 2004, na Matiu Elliott bụ na miri. Elliott, si San Antonio, Texas, ama mbụ a dọtaworo agba izu megide chepụtara mgbe ọ nọ 19, ke kpara nke 9/11. "O yiri apụghị ịghọta aghọta na anyị nwere ike wakpoo,"Ọ na-ekwu taa. -Achọkwa ndị na-eme ka echiche nke ihe merenụ o wee gafee emezu "truther" ije, a ugbu a nke uche na-akpakọbara ụta maka arụrụala n'ọnụ ụzọ nke ochichi US.
Related: Gịnị mere izu megide chepụtara otú mara mma? Podcast
"The ụzọ kasị agba izu megide chepụtara na-ẹkenịm, otu ihe mgbe niile na-eduga ná ọzọ, otú si n'ebe m kwenyesie ike na a na-achị achị otu a na-akpọ New World Order orchestrated ihe nile. Nke a ga nile iduga mara iwu na a kpamkpam anyị ohere,"Ọ na-ekwu. A afọ iri gasịrị, Elliott, ugbu a 34, bụ a "na-agbake" izu ọjọọ theorist, ọ tụgharịa azụ a worldview na mgbe niile posits ụfọdụ nzuzo, odudu eme megide ọdịmma nke ndị nkịtị. The mgbanwe nke nta nke nta, ma ọ na-eche nnọọ dị iche iche ugbu a. "Ị pụrụ ọbụna inwe ọtụtụ nke 50 na-ekwu, na-ekweta na ihe. Jisie doro Europe na Asians na-n'ụgbọ. "
Elliott si meghachi omume trauma nke 9/11 ahu di anya n'ebe ihe ọhụrụ. The ọgụ bụ otú enwetụbeghị ụdị, nnọọ njọ, na ọtụtụ n'ime anyị jisiri ike na-eme ka echiche nke ha. Early akụkọ bụ mgbagwoju anya ma ọ bụ na-emegiderịta: dị ka a n'ihi na ụfọdụ emeso ndị ukara version nke ihe obi abụọ. A nkezi nke ndị N'aka plumped maka nkọwa na ga-achọ fakery na nchikota on a oke ọnụ ọgụgụ.
Nke a ekwesịghị iju anyị anya: ọ bụ ihe nlereanya nke na-ugboro ugboro mgbe ọ bụla zuru ụwa ọnụ, ujo, na ke kpara nke Paris ọgụ, ọ zụlitere isi ya ọzọ. N'ime ụbọchị nke-eyi ọha egwu na French isi obodo, blọọgụ e bipụtara na-arụ ụka na ha bụ ndị na-arụ ọrụ nke ọchịchị - a na-akpọ "ụgha ọkọlọtọ" ọrụ. The ekwu zuru ike on echiche na Isis bụ kpachaara anya e kere eke nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ ọchịchị. More na nso nso, ndị ọkàiwu maka ezinụlọ nke Syed Farook, otu n'ime ndị San Bernardino shooters, ịkpatawo conspiratorial ntule mgbe ọ sịrị: "E nwere ihe a ọtụtụ nke na-akpali n'oge a mesie ma ọ bụ mepụta ihe e mere mmadụ ga-eme ka egbe akara ma ọ bụ ajọ mbunobi ma ọ ịkpọasị kwupụta na Muslim obodo."
The internet gbapụrụ ọsọ ihe nile elu, ikwe izu ọjọọ kpọrọ mmadụ jikọọ na ichepụta echiche ha
Okirikiri na-elekere mkpuchi nke zuru ụwa ọnụ ihe pụtara na e nwere a mgbe nile ọkọnọ nke nsogbu na ọgba aghara ka anyị na-akọwa. Akụkọ nke ndido urụk na-wetara site zoro ezo aka a staple anyị ntụrụndụ, si Spectre si Blofeld na Baroque izu ọjọọ nke London Spy, otu n'ime ndị kasị acclaimed British nkiri nke afọ, nke kọwaa na a ikpọ atụ nke paranoid style. Ọ bụghị na, ikwere na agba izu megide chepụtara na-aghọ ndị ọzọ zuru ebe nile, -ekwu nje swami, prọfesọ nke na-elekọta mmadụ akparamaagwa na Anglia Ruskin mahadum: mgbe research bụghị e mere ma, ọ na-agwa m, e nwere nza nke àmà dabeere n'ahụmahụ na-atụ aro na, ikwere na conspiracies nọgidere pụtara anụ nke ikpeazụ ọkara narị afọ ma ọ bụ otú. Olee Ihe Gbanwere, Otú ọ dị, bụ ndị na-agba nke na ọhụrụ chepụtara ii. "Ọ bụ mgbaàmà nke a ọtụtụ ihe ndị ọzọ integrated ụwa,"Ọ na-ekwu. The internet gbapụrụ ọsọ ihe nile elu, ikwe izu ọjọọ kpọrọ mmadụ jikọọ na ichepụta echiche ha. Na ntule ndịiche, o were ọnwa maka chepụtara banyere pearl Harbor ịzụlite.
Karen Douglas, ọzọ na-elekọta mmadụ ọkà n'akparamàgwà, kwupụtaghachiri a. "Ndị mmadụ nkwurịta okwu nakawa etu esi gbanwere nnọọ ọtụtụ ihe karịrị ikpeazụ afọ ole na ole. Ọ bụ naanị nke ukwuu mfe n'ihi na mmadụ na-esi ohere izu ọjọọ ọmụma ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere obere nkpuru obi abụọ banyere ihe ukara akụkọ. Ọ bụ nnọọ mfe na-aga online na-ahụ ndị ọzọ na-eche na otú ahụ ka gị. "
Bụ onye ọ bụla ewekarị nke a ụdị echiche, ahụ ọ bụ chekwaa nke oké ọnụ ọnụ? Douglas reckons ọ bụ karịa ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta. "-Adịbeghị anya nnyocha gosiri na ihe dị ka ọkara nke ndị America kwere dịkarịa ala otu izu megide tiori,"Ọ na-ekwu. "Ị na-achọ na nkezi ndị; ndị i nwere ike na-abịa gafee n'okporo ámá. "
Nke ahụ bụ na-echiche nke Rob Brotherton, onye akwụkwọ ọhụrụ, -enyo anyị enyo Uche, explores àgwà na predispose anyị ka anyị kwere na conspiracies. Ọ adọ aka ná ntị megide ọdụ na-ekpe ikpe, ebe ọ bụ na anyị niile nwere enyo anyị enyo uche - na ezi ihe kpatara ya. Ịmata ihe nakawa etu esi na-amata na o kwere omume egwu ka enyeworo anyị na-adị ndụ n'ime ụwa ebe ọdịdị mgbe bụ esi na gị. "Izu ọjọọ tiori akwụkwọ na-abịa mgbe ya na ele ihe anya nke debunking ha. M chọrọ ime a dị iche iche obibia, maka ileghara dum ma hà na chepụtara bụ eziokwu ma ọ bụ ụgha na-abịa na ya si n'ọnọdụ nke akparamaagwa,"Ọ na-ekwu. "The intentionality echiche ọjọọ, na proportionality echiche ọjọọ, nkwenye echiche ọjọọ. Anyị nwere ndị a quirks wuru n'ime uche anyị na pụrụ ime ka anyị kwere weird ihe n'amaghị ama na ihe mere anyị kwere na ha. "
Ben Whishaw na London Spy, otu n'ime ndị kasị acclaimed British nkiri nke afọ, nke kọwaa na a ikpọ atụ nke paranoid style. Foto: BBC / WTTV
"Mgbe ọ bụla ihe ọ bụla ambiguous-eme, anyị nwere a echiche ọjọọ kwupụta anya isi na ahụ a chọrọ - na o zubere ya, na e nwere ụdị ụfọdụ nke nzube ma ọ bụ gị n'ụlọnga n'azụ ya, kama na-eche echiche na ọ bụ nanị otu ihe mberede, ma ọ bụ ọgba aghara, ma ọ bụ na-atụghị-esi n'ihe. "Nke a intentionality echiche ọjọọ, Brotherton-ekwu, nwere ike achọpụtara site na nwata. "Ọ bụrụ na ị na-ajụ a-eto eto nwa ewu ihe mere o sneezed, na nwa ewu na-eche na ha mere ya na nzube, na onye ga-obi ụtọ Nje. Ọ bụ nanị mgbe ihe dị ka afọ anọ ma ọ bụ ise na anyị amalite na-amụta na ọ bụghị ihe niile na mmadụ niile na adịghị ezubere. Anyị na-enwe ike akpagbu na akpaka ikpe. Ma nnyocha na-egosi na ọ ka na-anọgide na anyị ọbụna n'ime ịghọ okenye. "
Ọmụmaatụ, ọmụmụ gosiri na mgbe ndị mmadụ na-aṅụ mmanya, ha na-yikarịrị ka ịkọwa ambiguous omume dị ka ọ na-akpachapụ anya. "Ya mere, ọ bụrụ na ị na ụlọ mmanya ma o jostles ị na akwafuo gị ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ gị na mbụ ọṅụṅụ, ị nwere ike ide ya anya dị ka ihe aka ya dị ọcha ndudue. Ma ọ bụrụ na ị na-a ole na ole ọṅụṅụ na, mgbe ahụ ị na-yikarịrị ka chere ha mere ya na nzube, na ọ bụ eme ihe ike ike ihe. "
Dị ka ọtụtụ àgwà, proneness ka intentionality echiche ọjọọ dịgasị gafee bi. "Ụfọdụ ndị na-ọzọ susceptible ka ọ karịa ndị ọzọ." Ma, Brotherton akọwa, e nwere otu obere ma a pụrụ ịdabere na mmekọrịta dị n'etiti na susceptibility na okwukwe na agba izu megide chepụtara.
Related: 9/11 truthers (ndammana) nọgide na Osama biini Laden agba izu megide tiori ibu
Nabata mmadụ na-ekerekwa òkè, n'ezie. n'ihi Ryan, onye jụrụ m hapụ idenye ya aha ikpeazụ, mmetụta nke a otu adọrọ adọrọ ahụ bụ oké mkpa. Ọ bụ Johnny, a enyi na bandmate, bụ onye gosiri ya akwụkwọ na CD banyere ọchịchị ụwa na "jere ozi dị ka a guru nke ụdị". N'otu oge ahụ dị ka inducting ya n'ime truther ije, "Ọ na-ewebata m ka m music m ga-anụtụbeghị na n'ezie n'anya". Na nke ịdị elu ya aka, Ryan kwuru, sị na o kweere a sara mbara elu ugwu nke agba izu megide chepụtara, gụnyere "chemtrails"- Echiche na ụzọ ụkwụ ekpe site ụgbọ elu nwere ajoo ulo oru ngo ọgwụ bu n'obi nọrọ n'okpuru ma ọ bụ nsi ndi; na ọrịa AIDS na Ebola e ẹkenam site ọchịchị ịchịkwa bi; na ọnwa landings e faked; na a umi amịpụtara si apricots akpọ laetrile bụ onye dị irè ọgwụgwọ maka ọrịa cancer, ma e iwu site FDA na anya dị ka òké rie ọ nwụọ iji chebe ọdịmma nke Big Pharma. "M imebi m mmekọrịta na ezinụlọ m merụsịrị. Ọ bụ mgbe niile ka na ị hụrụ n'anya ihe ndị kasị na ị chọrọ 'iteta'. Emesịrị m hugely ihere arụmụka na arụmụka,"Ọ na-ekwu.
Ma n'ofè nhụjuanya ya mere ka ndị ya nso, ndị Ryan si gbapụrụ iche kweere emerụ? Karen Douglas bụ nọgide na rubbishing niile gbara izu ọjọọ theorising ka ize ndụ. "Iche echiche n'ụzọ dị otú, Ọ ga-enwe ụfọdụ mma na ya pụta. Ọ bụrụ na mmadụ nile gaa gburugburu ganabata ihe a gwara ha, gọọmenti, isi, -emepụta ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị, onye ọ bụla nke, mgbe ahụ anyị ga-abụ a ụyọkọ aturu, n'ezie ". N'akụkụ aka nke ọzọ, mmetụta nke ụfọdụ chepụtara on omume pụrụ imebi ihe. Douglas onwe research [pdf download] egosiwo na ikiri echiche na British ọchịchị na-etinye aka ọnwụ nke Princess Diana belatara ndị ahụ bu n'uche na-arụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'otu aka ahụ, -achị bụ ndị na-agụ a ederede na-ekwu na mgbanwe ihu igwe bụ a hoax ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ego ndị ghara ịna-achọ ime ihe iji belata ha carbon akara ukwu. Na mgbochi ogwu izu ọjọọ akụkọ ime ka ndị mmadụ ghara ịna-vasinet ụmụ ha, a doro anya ọha egwu nke ahụ ike.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na dị nnọọ nabatara ihe ha na-gwara gọọmenti na-emepụta ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị, anyị ga-abụ a ụyọkọ aturu
Anyị kwesịrị ịgbalị ike ikpochapụ agba izu megide chepụtara si, mgbe ahụ? Part nke Brotherton si arumaru na ha na-a eke N'ihi ya nke ụzọ ụbụrụ anyị nwere, ghọrọ usoro. Ọ bụghị naanị na, ma na-agbalị ime Setan ha nwere ike imebi ihe. "Ọ bụla oge ị malite ịdị na debunk agba izu megide chepụtara, n'ihi na ndị na-n'ezie ikwere, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha ga-atụ anya na ọ bụrụ na izu ọjọọ ndị ezigbo,"Ọ na-ekwu.
Swami na-ahụ ihe anya iche iche. "Na na ọrụ anyị mere na-egosi na ọ bụ omume iji belata conspiracist ideation." Olee otú? Swami chọpụtara na ndị ahụ a gbara ume eche analytically n'oge a ọnụ ọrụ ndị na-erughị ga-aka anabata agba izu megide chepụtara e mesịa. n'ihi ya, a hints na ihe dị mkpa nwere ọrụ maka agụmakwụkwọ. "The ụzọ kasị mma bụ, na a societal larịị, iji na-akwalite gbasara nyocha echiche, izi pụrụ iche echiche nkà. "Ma ọ bụghị ihe niile. Mgbe ndị mmadụ nwere okwukwe na ha na-anọchite anya, ịghọta ihe ha na-eme na-atụkwasị obi na ha abụghị nke rụrụ arụ, ha bụ obere yiri ka ha kwere na coverups. Ọ bụ ya mere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nghọta kwesịrị ịdị na wusie ebe ọ bụla o kwere omume - na ụlọ ọrụ nghọta, oke. "A ọtụtụ ndị nwere nsogbu ịnakwere a big nzukọ ma ọ bụ ọchịchị si akụkọ nke ihe omume, n'ihi na ha na-hụrụ dị ka-apụghị ịtụkwasị obi, ha na-hụrụ ka ndị ụgha,"Rụrụ ụka swami.
Related: Ụwa ewepụghị? Gịnị planet dị o on?
Mma ozizi na mgbanwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-azụ ahịa omenala ga ihe ịrụ ụka adịghịkwa aka. Ma agba izu megide chepụtara nwere ike jụrụ n'ihi mkpebi onwe onye, oke. Ryan si ele gbanwere na ọnwụ nke ya "guru".
"M ọ dị ka ama esịn nke na kọntaktị na Johnny ke ama ọkọdọ ndọ na mụrụ nwa,"Ọ na-ekwu. "Ọ nọ na-enweta n'ihu na n'ihu n'ime ya, na m apụghị nnọọ ịnọgide na iche echiche jimnazum aka. "Ọ malitere ịchọ ọzọ nkọwa - na-erughị na-akpali akpali, ma ihe ezi uche dị ndị. "M anya na ndị arụrụ ụka na mba ozo, n'ihi na Mọsko na ndị dị otú ahụ. Ọ dịghị ụzọ ndị a ụmụ okorobịa na-ekwu okwu na platitudes na generalizations pụrụ n'ezie ịdị na-akpata a zuru ụwa ọnụ izu ọjọọ ka ohu ma ọ bụ igbu m. Ha na-adịghị eme a karịsịa ezigbo ọrụ nke ya ma obu, -atụle otú obi ụtọ m na-ebi ndụ m.
"Nke ahụ bụ epiphany, n'ezie. M bụ free. Obi dị m ụtọ. Ọ dịghị onye nke mbibi ma ọchịchịrị buru amụma na nkwa mgbe bịara. "N'ihi Ryan, site mgbe ahụ 27, na aru-agba ịnyịnya bu onye-. A ụwa na doro ya megide ihe ọjọọ niile bụ ndị mkpesa nke a spy ejije. Kama ihe mere eme bụ obere ka a akụkọ - na na ụzọ ụfọdụ na ihe mwute. Gịnị ka ọ na-eche na-ikike ndị na n'ezie enwe mmetụta ihe? "Ọtụtụ n'ime ihe ọjọọ ndị dị n'ụwa n'oge - ọma, M ga-etinye ya ruo incompetence na anyaukwu. A enweghị ọmịiko. "
← The kasị mma iPhone na iPad ngwa ọdịnala nke 2015 Ihe gị akwụkwọ mposi-ekwu banyere gị →